Posted on 11 / 18 / 2019 by 阿斯劳 wabhala ku Gallery.
Pyridoxal Hydrochloride noma vitamin B6 iyi-vithamini encibilikiswa ngamanzi etholakala kakhulu ekudleni. Isetshenziswa ikakhulukazi njengesengezo sokudla.
Lapho isetshenziswa njengesengezo, iPyridoxal Hydrochloride ingelapha noma ivimbele izinkinga eziningi zezokwelapha. Imvamisa ithathwa ngomjovo, ngomlomo noma ngezithasiselo zokudla.
Imithombo ejwayelekile ye-pyridoxine hydrochloride vitamin B6 ekudleni ifaka okusanhlamvu, inkukhu / ikalikuni, imifino nezithelo.
2. Kungani Abakhi Bomzimba Badinga Amavithamini - i-pyridoxine Hydrochloride?
Njengomakhi womzimba, uzodinga izakhamzimba ezingaphezulu kwalabo abahola impilo yokuphila. I-B-6 pyridoxine hydrochloride ibaluleke kakhulu kuwe ngoba iyimfuneko yemisipha phosphorylase, umsebenzi ohlotshaniswa ne-glycogen metabolism. Ngamafuphi, udinga uvithamini B6 ukuthola umzimba onempilo. I-Vitamin B6 ithuthukisa imisebenzi yama-enzyme abamba iqhaza ekuwohlokeni kwamaprotheni.
Imiphumela yePyridoxine hydrochloride emzimbeni kuhlobene kakhulu nendima yayo kwiprotheni metabolism. Kungakho uma uyisebenzisa, kungakuhle ukuthi usebenzise ibhulakufesi ngaphambi kokuya ejimini. Ungathatha futhi ukudla okunothe amaprotheni ngesikhathi sakho sangaphambi kokuzivocavoca, ngenkathi uziqeqesha, ngemuva kokuqeqeshwa nangaphambi kokulala.
Noma kunjalo, lokhu akusho ukuthi uziba okunye ukudla. Umzimba wakho udinga inqwaba yamanye amaminerali abalulekile ukuze asebenze kahle futhi akuvikele ezifweni.
Udinga namandla amaningi ngesikhathi sokuphuma emsebenzini. I-Pyridoxine hydrochloride izuzisa umzimba wakho ngokwandisa izinga lokusha kwama-carbohydrate kumaseli akho. Lokhu kuqinisekisa ukuthi uthola amandla anele.
Ngo-1939, uFolkers noHarris banquma ukwakheka kwe-pyridoxine. Eminyakeni eyisithupha kamuva, uSnell wakhombisa ukuthi i-B6 yayinezindlela ezimbili: i-pyridoxamine ne-pyridoxal. Igama elithi Pyridoxal Hydrochloride lavela ngoba i-vitamin B6 yayakhiwe ngendlela efanayo ne-pyridine.
Phakathi kwamavithamini e-B, iPyridoxal Hydrochloride ibaluleke kakhulu kokubili impilo yomzimba nengqondo yabakhi bomzimba. Kuyasiza ekukhuleni kwamaseli amasha, kuchaza I-Pyridoxine hydrochloride bodybuilding ikhono. I-B6 iphinde isize ekulinganiseni i-potassium ne-sodium, nasekwenzeni ama-nucleic acid, iDNA ne-RNA nayo eyingxenye yayo.
Ukushoda kwePyridoxal Hydrochloride kuholela ekuthukeni, ekucasukeni, ekuqwashisweni, ebuthakathakeni, olimini oluvuvukele, izipikili ezijiyile, isifo samathambo kanye namathambo.
Kodwa-ke, ngokocwaningo oluthile, isilinganiso samanje sePyridoxal Hydrochloride esinconyelwe abantu abakhuthele nguHulumeni wase-US asanele.
Lokhu kusho ukuthi labo abakhawulela amaqembu okudla noma abakhawulela ama-calories bangase babe sengozini yokushoda. Ngakho-ke, kungenzeka bangazuzi emiphumeleni ye-pyridoxine hydrochloride uma bethatha kuphela umthamo njengoba kunconywe uhulumeni.
Ngokuya ngemiphumela yalolu cwaningo, kungaba ukuhlakanipha ukubonisana nochwepheshe wakho wezokunakekelwa kwezempilo ukuze akusize ukuthola isilinganiso esikahle / esanele se-pyridoxine hydrochloride bodybuilding dosage for you.
I-B-6 pyridoxine hydrochloride ibamba iqhaza elibalulekile ekulawuleni izimo zomoya. Lokhu kungenxa yokuthi kudala ama-neurotransmitters alawula imizwa. I-Pyridoxine hydrochloride yokukhulelwa ibaluleke kakhulu kwabesifazane abanemizwa noma abanemizwa eguquguqukayo ebangelwa ukungalingani kwamahomoni ngesikhathi sokukhulelwa.
Ucwaningo olulodwa olubandakanya abantu abadala abayi-156 abanokukhubazeka okuncane kwengqondo kanye namazinga aphezulu egazi le-homocysteine ​​bathole ukuthi umthamo ophakeme we-pyridoxine hydrochloride wehlisa amazinga e-homocysteine ​​egazini futhi wehlise nokonakala kwezinye izingxenye zobuchopho ezisengozini ye-Alzheimer's.
Enye yezinzuzo ze-pyridoxine hydrochloride ukuthi ingasetshenziswa ekwelapheni izimpawu ze-PMS kufaka phakathi ukucasuka, ukudana nokukhathazeka. Abaphenyi bakholelwa ukuthi uvithamini B6 ingazelapha lezi zimpawu ngoba idala ama-neurotransmitters asiza ekulawuleni imizwa.
Emashumini amaningi eminyaka, i-vitamin B6 isetshenziselwe ukwelashwa kwesicanucanu nokuhlanza kwabesifazane abakhulelwe. Futhi kuyisithako se-Diclegis, umuthi osetshenziswa ekwelapheni ukugula kwasekuseni. Lokhu kuphakathi kwezinzuzo eziphezulu ze-pyridoxine hydrochloride kwabesifazane abahlushwa yilesi simo ngesikhathi bekhulelwe.
Umthamo olungile we-pyridoxine hydrochloride ekukhulelweni uyehluka kuye ngomuntu nomuntu. Ucwaningo olubandakanya abesifazane abangama-342 abakhulelwe lwathola ukuthi umthamo wansuku zonke ka-30mg wevithamini wehlisa ngokuphawulekayo umuzwa wabo wokuba nesicanucanu ezinsukwini ezinhlanu nje kuphela kokuqala kokwelashwa
I-Pyridoxine hydrochloride idlala indima enkulu ekuvimbeleni ukuvaleka kwemithambo yegazi kungakho kunciphisa ubungozi besifo senhliziyo. Uma unamazinga aphansi kavithamini B6, ingozi yakho yokuthola isifo senhliziyo icishe iphindwe kabili uma iqhathaniswa nalezo ezinamazinga ajwayelekile evithamini egazini. Uvithamini B6 wehlisa amathuba okuvaleka kwemithambo yegazi ngokunciphisa amazinga we-homocysteine ​​egazini.
Lokhu mhlawumbe kubaluleke kakhulu Ukusetshenziswa kwe-pyridoxine hydrochloride okunikeziwe ukwanda komdlavuza namuhla. Uma uthola ngokwanele i-Pyridoxine hydrochloride, ingozi yakho yokuthola izinhlobo ezithile zomdlavuza izokwehliswa. Isizathu salokhu asicaci kahle kepha abacwaningi bakholelwa ukuthi kuhlobene nekhono le-B6 lokulwa nokuvuvukala okubangela izimo ezingamahlalakhona ezinjengomdlavuza.
Kocwaningo oluthile olwenziwe ukuthola ubudlelwano phakathi kwamazinga e-pyridoxine hydrochloride nomdlavuza webele, kutholakale ukuthi amazinga anele we-B6 egazini anciphisa ubungozi bomdlavuza webele, ikakhulukazi kwabesifazane abangemva kokuya esikhathini.
UVitamin B6 usiza ukuvikela izifo zamehlo, ikakhulukazi lezo ezihlobene nokuwohloka kweminyaka okuhlobene nobudala (i-AMD). Uma unamazinga aphezulu we-homocysteine ​​ageleza egazini lakho, uzoba nengozi ephezulu yokuthuthukisa i-AMD. I-Pyridoxine hydrochloride iyasiza ekwehliseni amazinga aphakeme we-homocysteine ​​egazini yingakho yehlisa ubungozi be-AMD.
Olunye ucwaningo luxhumanise izinkinga zamehlo namazinga aphansi egazini; ikakhulukazi izinkinga zamehlo eziholela ekuvinjelweni kwemithambo exhunywe kwi-retina. Izinga eliphansi le-pyridoxine hydrochloride nalo lihlotshaniswa nokuphazamiseka kwe-retina.
I-Pyridoxine hydrochloride iphephile ukuthi ingasetshenziswa ngabakhi bomzimba. Kuphephile futhi ukusetshenziswa kokwelapha. Kodwa-ke, inemiphumela ehlukile kubantu abahlukahlukene Eminye imiphumela emibi ye-pyridoxine hydrochloride ifaka:
Uma uhlangabezana nemiphumela emibi ye-pyridoxine hydrochloride lapho-ke kungakuhle ukuthi ufune usizo lwezempilo.
Imithamo ephezulu kakhulu yePyridoxal Hydrochloride ingadala ukuphazamiseka kwemizwa. Lokhu kuphazamiseka kungahle kuholele ezinkingeni zokuqina nasekulahlekelweni umuzwa emilenzeni. Kukhona neminye imibiko yokuthi amanani aphezulu we i-pyridoxine hydrochloride kungaholela ekuphendukeni kwesikhumba. Ngenhlanhla, lapho umisa imithamo ephezulu, uzolulama ngokugcwele.
Uma usemuthini we-Pyridoxal Hydrochloride, akufanele ume, uqale ukuwusebenzisa ngokuhambisana nomunye umuthi, noma ushintshe isilinganiso ngaphandle kwemvume yomhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwempilo.
Noma iPyridoxal Hydrochloride ingenakho ukuhlangana okungathi sína noma okunzima nezinye izidakamizwa, kuhle ngaso sonke isikhathi ukuthi uqaphele.
Njenge-Luminal, Pyridoxal hydrochloride (65-22-5) wephula le khemikhali ukuze uyiqede emzimbeni wakho. Ukuthatha inhlanganisela ye-Dilantin ne-Pyridoxal Hydrochloride kuzonciphisa ukusebenza kwangaphambilini emzimbeni wakho. Lokhu kungakhuphula amathuba okuthi uhlaselwe okuthile.
I-Pyridoxal Hydrochloride inokusebenzisana okuncane nezidakamizwa ezingaphezu kwezingu-70. Ngakho-ke, ngaphambi kokusebenzisa noma imuphi umuthi ngokuhambisana nawo, qiniseka ukuthi uthinta umhlinzeki wakho wezempilo.
Izinzuzo zePyridoxal Hydrochloride kuma-bodybuilders ziningi. Hhayi kuphela abakhi bomzimba, wonke umsubathi obucayi odinga ukuba nale vithamini esitokweni. Kodwa-ke, kufanele uyisebenzise ngokunamathela ngokuqinile emithamo enconywe ngodokotela.
Imibuzo eyi-6 Mayelana ne-Afatinib kuma-Anti-Caners (NSCLC)
Ngabe iMK-677 (Ibutamoren) isebenza kahle Ekwakheni Imisipha? Isibuyekezo Sarm [OKUSHA]
IFlibanserin Isiza Kanjani Owesifazane NjengeHormone Yezocansi I-Synephrine HCL Powder - Isishisi samafutha nezithasiselo zokwehlisa isisindo